Guddoomiyaha Baarlamaanka Hishabelle oo gaaray magaalada Beledweyne - Home somali news leader
Home NEWS Guddoomiyaha Baarlamaanka Hishabelle oo gaaray magaalada Beledweyne
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Maxamed iyo wafdi uu hoggaamiyay ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wafdiga uu hoggaaminayay guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khilaaf ku soo dhoweeyay Mas’uuliyiin uu ka mid ahaa Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Maamulka iyo xubno kale.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa loo galbiyay Xarunta Maamulka Gobolka oo uu ku sugan yahay Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas Yuusuf Axmed Hagar Daba-geed oo maalmo kahor gaaray Beledweyne.
Wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka oo saaka ka ambabaxay magaalada Jowhar ayaa diyaaradii ay saarnaayeen waxaa soo wajahday cillad farsamo iyadoo ka degtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiye Luqmaan iyo xubnaha wafdigiisa oo ay ku jiraan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa diyaarad kale ka soo raacay Muqdisho taasoo ugu dambeyntii geysay magaalada Beledweyne.
guddoomiye luqmaan oo gaaray magaalada Beledweyne
Previous articleAt least two dead after car collision on pedestrian street in German city of Trier
Next articleIs China provoking a diplomatic struggle with Australia?